एन्जाइटी किन हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
एन्जाइटी किन हुन्छ ?
मुटुको धड्कन बढ्नु, श्वासप्रश्वास तीब्र हुनु, अचानक निद्रा खुल्नु, सुतेको अवस्थामा पसिना आउनु । यावन् अवस्थालाई हामी मुटुको समस्या वा अन्य रोगको लक्षण सम्झने गर्छौं । जबकी यस किसिमको संकेत एन्जाइटी डिसर्डर पनि हुनसक्छ ।
खानपानमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । सन्तुलित भोजनको प्रयोग गर्नुपर्छ । रक्सी, चुरोट, सुर्ती तथा अन्य लागु पदार्थहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन । अनलाइनखबर बाट सभार